350 / 700mA * 3ch 12-48VDC CC ကို DMX ဒီကုဒ်ဒါ - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Euchips စက်မှုဇုန်
350 / 700mA * 3ch 12-48VDC CC ကို DMX
350 / 700mA * 3ch 12-48VDC CC ကို DMX ဒီကုဒ်ဒါ
item အဘယ်သူမျှမ .: PX703
input ဗို့အား VAC: 12-48
output လက်ရှိ VAC: 350 / 700mA * 3CH
output ဗို့အား VAC: 3-42
: Mode ကိုမှိန် DMX-512/1990
Size ကိုမီလီမီတာ: * 40 196 * 35.5
350 / 700mA * 3ch 12-48VDC constant လက်ရှိ DMX ဒီကုဒ်ဒါ PX703
PX703 DMX512 ဒီကုဒ်ဒါကိုသုံးပါမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ အားသာချက် microcomputer ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာချမှတ်ခြင်းအားဖြင့်, PX703? ခြင်း simulation signal ကိုထဲသို့စံဒစ်ဂျစ်တယ် signal ကိုအသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ signal ကို output ကို3ချန်နယ်များနှင့်နည်းတစ်ခုချင်းစီကိုရုပ်သံလိုင်းအဖြူအမည်း၏ 256 အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာမီးခွက် LED မြင့်သောအာဏာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အလင်းမှိန်ခြင်း panel ကိုသို့မဟုတ်ခြင်း simulation ဆီလီကွန်သေတ္တာနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
01. တွေ့ဆုံ DMX512 (1990) နျ Standard
02. အဖြူအမည်း၏ 256 အဆင့်ဆင့်၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အပြည့်အဝအရောင်ကားမောင်းသူအလင်းမှိန်ခြင်း
အဆက်မပြတ်လက်ရှိထွက်ရှိ၏ 03.3လိုင်းများ (350mA / 700mA)
05 ။ verious Self-ပြောင်းလဲနေတဲ့ modes သာ, အမြန်နှုန်းနှင့်တောက်ပပြောင်းလဲအတူ။
fuction ရွေးချယ်ရာတွင်အရောင်နှင့်အတူ 06. ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောမီးခွက် RGB သုံးခုအရောင်များထားရှိရေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
07. Mode ကို, ပါဝါမှတ်ဉာဏ် function ကိုရပ်ဆိုင်း
08. ကျော်-အပူချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, output ကိုတိုတို circuit ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်
မီး DMX လိပ်စာလွတ်လပ်စွာချိန်ညှိခြင်း 09.
နဲ့ LED မီးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ 10. လွယ်ကူ
11. customerized နိုင်
ထုတ်ကုန်အမည်3channel များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ DMX ဒီကုဒ်ဒါ LED
signal input ကို DMX-512/1990
signal ကို output 350mA / 700mA ± 5% / CH
အလုပ်လုပ် tempeture0င် ~ 85⊥
အရွယ် 196 (မီလီမီတာ) * 40 (မီလီမီတာ) * 35.5 (မီလီမီတာ)
ယခင်: 60W 900/1050/1200 / 1400mA * 1ch CC ကို Triac ယာဉ်မောင်း
နောက်တစ်ခု: 12-24VDC 5A * 12ch DMX512 ဒီကုဒ်ဒါ & မာစတာ
Dmx Led ဒီကုဒ်ဒါ
Led Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
Led RGB Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား RGB Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
Dmx ဒီကုဒ်ဒါ Dmx ယာဉ်မောင်းဦးဆောင်ပြီး
Led Dmx ဒီကုဒ်ဒါယာဉ်မောင်းဦးဆောင်ပြီး
စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
24 Channel ကို Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
Dmx 512 ဦးဆောင်ပြီး ဒီကုဒ်ဒါ
စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား Pwm Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
32 လိုင်းများ Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
Dmx 512 ဒီကုဒ်ဒါ
Dmx Pwm ဒီကုဒ်ဒါ
24ch Dmx Pwm ဒီကုဒ်ဒါ
32 Channel ကို Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
Rgbw Led Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
RGB Dmx 512 ဒီကုဒ်ဒါ
LED မီးမြှောင် Dmx 512 ဒီကုဒ်ဒါ
Led Dmx ဒီကုဒ်ဒါ Rgbw
Rgbw Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
4 Channel ကို Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
3 လိုင်းများ RGB Led Dmx ဒီကုဒ်ဒါ
Dmx Led ပါဝါဒီကုဒ်ဒါ
programmable ဆက်သွယ်ပါ Access ကို Module
100W 12VDC Triac Dimmable constant ဗို့အား LED ...